Diyaarado ay leedahay dowladda Imaaraatka Carabta oo qalab caafimaad ka dajiyay Muqdisho.
Tuesday April 14, 2020 - 12:08:44 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Diyaarado xamuul ah oo siday gargaar caafimaad ayaa maanta soo caga dhigtay garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada Muqdisho xilli garoonku uu bilihii lasoo dhaafay xirnaa.
Dowladda Imaaraadka carabta ayaa daawo iyo qalab caafimaad oo loogu talagalay ka hortagga cudurka Carona Virus waxay ku wareejisay wasaaradda caafimaadka DF-ka.
Deeqdaan oo gaaraysay 27 tan ayaa la sheegay in loogu talagalay in loo adeegsado latacaalidda Carona Virus, isbuucii lasoo dhaafay ayay dowladda Imaaraatka sidaan oo kale qalab caafimaad uga dajisay magaalooyinka Boosaaso iyo Hargeysa.
Xurguf siyaasadeed ayaa sanadadii lasoo dhaafay ka dhax aloosneed DF-ka iyo Imaaraatka Carabta kadib markii Farmaajo iyo Kheyre ay ujanjeersadeen dhanka dowladda Qadar oo khilaaf kala dhaxeeyo xulufada Sacuudiga iyo Imaaraatka Carabta.
Qalabka caafimaad ee laga dajiyay garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa kusoo aadaya xilli bukaannada la ildaran cudurka Carona ee jiifa Isbitaalka Martiin ay ka sheeganayaan dayacaad dhanka caafimaadka ah.
Xildhibaan katirsanaa maamulka Hirshabelle oo dhowaan udhintay Carona Virus ayaa la sheegay in ladayacay oo uusan helin adeegyadii caafimaad ee aas aasiga u ahaa in lagula tacaalo Carona Virus.